မြင်ရသူတွေ မျက်ရည်ကျရတဲ့ "ကိုဗစ်ကြောင့် တကွဲတပြား ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုလေး" - Zet Star
မြင်ရသူတွေ မျက်ရည်ကျရတဲ့ “ကိုဗစ်ကြောင့် တကွဲတပြား ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုလေး”
ကိုဗစ် ကူးစက်မခံရသေးလို့ အထင်မသေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေကြနဲ့…. မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့နေရတော့ ပြင်ပမှာ သွားလာလှုပ်ရှားသူတွေကို မြင်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ပိုမိတယ်… မိသားစုတစ်စု… သားအမိသားအဖ လေးယောက်ရှိတယ် အဖေဖြစ်သူက လုပ်ငန်းခွင်သွားလာရင်း အလုပ်ထဲမှာ Q ဝင်လိုက်ရတယ်…. အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သားအမိသုံးယောက် Home Q နေလိုက်ရတယ်…
လေး,ငါးရက်မြောက်တော့… အဖေလုပ်တဲ့သူကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့ Positive တွေ့တယ်… သားအမိသုံးယောက်လုံး Home Q ကနေ Facility Q ဝင်လိုက်ရတယ်… စစ်ဆေးကြည့်တော့ သားနှစ်ယောက် လူမမယ်လေးတွေက Positive ဖြစ်နေတယ်.. အမေကတော့ Nagative…
အဲ့အချိန်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြ… အဖေလုပ်တဲ့သူက တောင်ဥက္ကလာဆေးရုံမှာ Positive, ဆေးရုံတက်နေတယ်… သားနှစ်ယောက်ထပ်ဖြစ်တော့… ကလေးနှစ်ယောက်ကို Q မှာထားလို့မရတော့ဘူး… ဆေးရုံပို့ရတော့မယ်… မိသားစုလေး လေးယောက်ရှိတာ.. မိတစ်ကွဲ ဖတစ်ကွဲ ဖြစ်သွားပြီ… အမေလုပ်တဲ့သူလည်း ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး… အရင်က လင်ယောင်္ကျားအတွက်ပဲပူရတာ အခုတော့ ရင်နဲ့လွယ်မွေးခဲ့ရတဲ့သားတွေ အဖေအလုပ်သွားချိန် အမေဖြစ်သူနဲ့ ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်ရတဲ့ ကလေးတွေ….
ဆေးရုံကားရောက်လာတော့… ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် အိတ်ကလေးတွေ ဆွဲပြီးထွက်လာတယ် ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ဆွဲလို့ အငယ်လေးက မနိုင်တော့ အကြီးကောင်လေးက ကားပေါ်မတင် နေရာချ ဆေးရုံကားနောက်ခန်းထဲမှာ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ထဲ အမေမပါ… ကားပေါ်အရောက် နေရာယူပြီး… ကားတံခါးမပိတ်ခင် ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်လုံးက…. ဦးလေး… သားတို့အမေကို စောင့်ရှောက်ပေးပါတဲ့…. အေးပါ ကလေးတို့ရယ် သားတို့ပြန်ကျန်းမာနေကောင်းလာအောင် အဘတို့ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်…. သားတို့အမေကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးပါမယ် သားတို့ရယ်…. သားတို့အမြန်ပြန်နေကောင်းပါစေ…. ဆုတောင်းပေးရုံမှတစ်ပါး အမေလုပ်တဲ့သူက ကလေးတွေစစ်ဆေးချက် Positive အဖြေသိကတည်းက အခန်းခွဲနေရပြီလေ….
ဆေးရုံကားထွက်တော့ နောက်ခန်းအလုံပိတ်ထဲကနေ လက်ကလေးတွေပြလို့.. အဆောင်ခွဲနေရတဲ့ အမေလုပ်တဲ့သူကလည်း လက်ကလေးပြ ကလေးတွေကလည်း ပြန်ပြနဲ့… တာဝန်ကျ ဆရာဝန်, နာ့စ်, Volunteer တွေ အားလုံးစိတ်နှလုံး မချမ်းမြေ့… မျက်ရည်ရစ်ဝိုင်းသူက ဝိုင်း…
ကိုဗစ် ရောဂါကူးစက်ရင်… အဖေ၊ အမေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အတူတစ်ကွ မရှိကြတော့ဘူး… ဒီကလေးတွေ ဟိုရောက်ရင် အနီးကပ်ပြုစုမဲ့ မိဘဆွေမျိုး မရှိဘူး.. ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတောင် PPE ဝတ်စုံတွေနဲ့ မျက်လုံးကလေးပဲ မြင်ရတာ သူတို့ ညီအစ်ကိုကလည်း အတူမနေရတော့ဘူးလေ… ခွဲနေကြရမှာ…
အဲ့သလိုအဖြစ်မျိုး အချိန်မျိုး ခင်ဗျားတို့ အရောက်ခံကြမှာလား… ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ကြပါဗျာ မဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး… ဖြစ်လာရင်… အားလုံးမပေါ့ဆကြပါနဲ့… အခုအချိန်က ပြင်းထန်လာတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ… ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မတွေ့ကြုံရအောင် ပေါ့ပေါ့လေးမတွေးကြပါနဲ့….
← ရန်ကုန်မှာ ထပ်တိုးလာမယ့် ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် နေရာကျန်သေးဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော
ရင်နင့်ဖွယ် ကိုဗစ် ဇာတ်လမ်း တပုဒ် (ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် ကွဲကွာနေရတဲ့ မိသားစုတစုအကြောင်း) →